नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : खरो बोल्ने र कडा मिजासका कटवालले पछिल्लो समय आफ्नो आत्मकथा मार्फत आफ्नै कारण देशमा अधिनायकवाद नआएको र नेपाली सेना बचाएको दावी गर्नुभएको छ !
खरो बोल्ने र कडा मिजासका कटवालले पछिल्लो समय आफ्नो आत्मकथा मार्फत आफ्नै कारण देशमा अधिनायकवाद नआएको र नेपाली सेना बचाएको दावी गर्नुभएको छ !
‘जनरल नेभर रिटायर्स’ सैनिक अधिकारीहरुले भन्ने गरे झैं नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति रुकमाङ्गद कटवालले पनि आफू रिटायर्ड भएको छनक दिएका छैनन् । कटवाल कहिले माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन, कहिले हिन्दुराज्य त कहिले राजसंस्था त कहिले चर्को राजनीतिक टिप्मणीका कारण बिबादमा परिरहनु हुन्छ । खरो बोल्ने र कडा मिजासका कटवालले पछिल्लो समय आफ्नो आत्मकथा मार्फत आफ्नै कारण देशमा अधिनायकवाद नआएको र नेपाली सेना बचाएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँका सहकर्मी तथा राजनीतिक उच्च तह का केही नेताहरुले उहाँको पुस्तकवारे प्रतिक्रिया दिइसकेका छन । आत्मकथामा अक्सर आफूलाई नै केन्द्रविन्दुमा राखेर लेखिने हुनाले लेखक स्वयं नायककै रुपमा प्रस्तुत हुने गर्छन । आत्मकथामा लेखक इमान्दार नबन्दा उनीहरुका दुर्वल पक्ष कमै मात्र आउंछन् । उहाँको आत्मकथामा के कति सत्य वा बढाई चढाई गरिएको छ ? उहाँकै मुखबाट ! - दिलभुसण पाठक